Nhau - Zvinorevei kuti OEM / ODM mukugadzira zvipfeko?
OEM neODM inzira mbiri dzekugadzira mbatya. Iwe pamwe wakavaona munzvimbo zhinji. Asi zvinorevei chaizvo? Ngationei.
1.OEM - Chekutanga Equipment Mugadziri
Anogadzira michina yepakutanga mune zvipfeko anozivikanwa seye chena chitema mbatya mugadziri kana seyakavanzika chitaridzi mbatya inogadzira. Iyi nzira yekugadzira zvipfeko inobvumira fekitori kuti vagadzire ivo pachavo magadzirirwo uye maratidziro ezvigadzirwa zvehembe asi neako chitaridzi pairi. Iyi nzira yekugadzira mbatya iri nyore kune avo vasina chero dhizaini uye mazano sezvo fekitori inogona kubva ipapo kukupa iwe. Zvinova nyore kana iwe uchingoda kusarudza dhizaini yaunosarudza kwavari kuti vagadzire kana gohwo reruzhinji.
2.ODM - Yekutanga Dhizaina Kugadzira
OEM ndicho chidimbu cheOriginal Equipment Mugadziri, inova inochinja-chinja asi zvakare yakaoma nzira. Iyi nzira yekugadzira mbatya inobvumira iyo fekitori kugadzira zvipfeko zvinoenderana neyako dhizaini uye zvirevo. Pachave neako chiratidzo chechiratidzo pane chigadzirwa, uye chinogona kuve chakagadzirwa chero nguva zvinoenderana nezvaunoda. Kana iwe ukasarudza iyo OEM nguo yekugadzira fekitori nzira, iyo fekitori ingori vashandi vako, uye ese magadzirirwo uye mazano ndeenyu zvachose, asi ivo vanozozvigadzira.
Nekudaro, iwe unofanirwa kuve wakasununguka kune mazano kubva kufekitori pachayo kuitira kuti uchengetedze hukama hune hukama pakati penyu vaviri. Vhura mitsara yekutaurirana zvakare kiyi yekuve akabudirira OEM zvipfeko muzvinabhizimusi kana yakavanzika chitambi zvipfeko tambo. Kuisa kwavo muchigadzirwa chako kunobatsira kambani yako mukufamba kwenguva, sezvo vari nyanzvi pamabasa avo uye ivo vachibata chigadzirwa chako senge chavo.